संघीयता मात्रै दोषी हो र ? : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारसंघीयता मात्रै दोषी हो र ?
नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनबिना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव छ । देशको पढेलेखेका जमात, विश्लेषक तथा कतिपय मिडियाकर्मीसमेतले समाजमा यस्तो भाष्य (नैरेटिभ) स्थापित गरिदिएका छन् कि देशको प्रत्येक समस्याका निमित्त संघीयता नै जिम्मेवार छ । यथार्थमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राप्रपा नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा नै संघीयताविरोधी रहिआएका छन् । संघीय संरचनालाई नेपालका निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थक अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन् । विदेशी सञ्चार माध्यमको जागिरबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका एक जना महानुभावको संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणीले पनि उपरोक्त तीन दलकै चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
जुन संघीयता नेपालमा आएकै छैन । त्यसलाई नै वर्तमान समस्याको कारक बताउनु पूर्वाग्रही मानसिकताको प्रतीक हो । नेपालमा हाल देखिएका समस्या संघीयताकै उपज ठान्नेहरूले यथार्थमा संघीयतालाई बुझेकै छैनन् । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना देशका संघीयताविरोधीको साझा षड्यन्त्रको परिणाम हो । विद्यमान स्थानीय तहको संरचनालाई संघीयताको सौताका रूपमा ल्याइएको हो । प्रादेशिक सरकारभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु यसैको परिणाम हो ।
संघीयता भनेको राज्य–शक्तिको अधिकार विभाजन हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको प्रमुख अंग मानिन्छ । जबसम्म प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइँदैन, तबसम्म प्रादेशिक संरचना फलदायी साबित हुन सक्दैन । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा अघि सार्नुको अर्थ नै प्रादेशिक संरचनालाई निरीह र दयनीय बनाउनु हो । एकात्मक शासन प्रणालीका पक्षधर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार त दिएकै छैनन् तर प्रत्येक असफलताको दोषी अवश्य मानिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकार पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न कमजोर साबित भएकै हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामा यो नै सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा संघीयताले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई एक सूत्रमा बाँधी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल साबित भएको अनेकौं उदाहरण छन् ।
संघीय संरचनालाई नेपालका निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थक अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन्
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको माग तराई कांग्रेसले २०१० सालमा नै गरेको थियो । त्यसपछि आमनिर्वाचन २०१५ मा यो नै उसको प्रमुख चुनावी मुद्दा पनि थियो । २०४७ सालदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम ग¥यो । जनान्दोलन २ को सफलतापश्चात् आठ दलको सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्दको उल्लेख नभएकै कारण नेसपा (आनन्दीदेवी)ले त्यसमा आप्mनो लिखित असहमति जनाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर तराई–मधेसमा प्रभावकारी आन्दोलन चलाउन सफल भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्रमुख पात्र हुन् । संघीयता अहिले पनि उनको पार्टीको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहिआएको छ ।
यस पार्टीले प्रादेशिक संरचनाहरूको पूर्ण सीमांकन हुनुपर्ने तथा प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संघीयताका कारण नै तराई–मधेसका २ सयभन्दा बढी युवाले आप्mनो ज्यान पनि गुमाएका छन् । अहिले पनि तराई–मधेस र जनजाति युवा संघीयताका निम्ति जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छन् । तसर्थ, संघीयताको सवालमा प्रतिगामी पाइला चाल्ने काम भरसक कुनै पनि पक्षबाट हुनुहुँदैन । अन्यथा, तराई–मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले आप्mनो खस्किँदो जनाधार एवं लोकप्रियता पुनः प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानले अग्रगमन मात्र रुचाउन सक्छ, पश्चगमन होइन । नेपालमा रातारात क्रान्तिकारी बन्ने र भोलिपल्टै प्रतिगामी बन्ने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यसको एक पात्र बनेका महानुभावले त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र गरिबीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपथ्र्याे ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आए यता के कति कारणले देशको विकास हुन सकेन ? आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सबै वर्गको एक समान पहुँच हुन सक्यो कि सकेन ? परिर्वतनको अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ कि छैन ? स्थानीय तहका निम्ति हुने गरेको बजेट विनियोजनको सदुपयोग हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यस विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । ओली सरकारमाथि भ्रष्टाचारका कतिपय आरोप लागेका थिए तर त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संघीयताविरोधमा कहिल्यै रहेन । हाल यता आएर नेपालका प्रत्येक समस्याको निम्ति संघीयतालाई दोषी ठह¥याउने कसरत हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मात्र मान्न सकिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ
दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने हाम्रासामु दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल संघीय ढाँचाको उदाहरण विद्यमान छ । क्षेत्रफल र जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताका कारण त्यहाँ यस संरचनालाई स्वीकार गरिएको हो । गणतन्त्र भारतको संविधान जारी भएको सात दशक नाघिसकेको छ तर अहिले पनि त्यहाँको संविधानलाई त्यहाँको जनताले ईश्वरसरह नै ठान्ने गर्छ । भारतको संविधानले विविध भाषाभाषी तथा जाति, समुदायका मानिसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल साबित भएको छ । भारतमा प्रत्येक भाषाभाषी एवं जाति, समूहको माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।
पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नागा, मिजो, असमिया, अरुणाचलका आदिवासी, हालै लद्दाखका आदिवासीका निम्ति, दक्षिणमा भाषा र सामुदायिक एकरूपताको आधारमा, गुजरात, पञ्जाव र महाराष्ट्रमा पनि भाषाको आधारमास जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड तथा राजस्थानमा क्षेत्रफलका कारण प्रादेशिक संरचनालाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको छ । यहाँ भाषा, संस्कृति, जातीय तथा सामुदायिक एकरूपता तथा पहिचानलाई महŒव दिइएको छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर जनताको प्रत्येक सम्भव माग र गुनासाहरूको लोकतान्त्रिक तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । देश स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यहाँको जनताले पुनः हतियार उठाउने अवस्था उत्पन्न भएन । झिनामसिना विरोध प्रदर्शनका घटना भए पनि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम भएको देखियो ।
धर्मका आधारमा भारतबाट छुट्टिएर पाकिस्तान त बन्यो तर पाकिस्तानले आप्mनै देशका बहुसंख्यक आवादी बंगाली मुसलमानको मातृभाषा बंगलालाई मान्यता नदिएको कारण, केवल भाषाकै कारण पाकिस्तानको विभाजन हुन पुग्यो र बंगलादेशको जन्म भयो, अर्थात् कहिलेकाहीँ धर्मभन्दा भाषा ठूलो हुने गर्छ । सोभियत संघले पनि संघीय संरचना आत्मसात् गरेको थियो तर लोकतन्त्र थिएन, फलस्वरूप पतनको सिकार भयो । संघीयता सफल हुन लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ, तसर्थ, संघीयता असफल हुँदैन तर यसका निम्ति देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
मुम्बई । पोर्नोग्राफी गरेको अभियोगमा व्यापारी राज कुन्द्रा गिरफ्तारीमा परेपछि बलिउडमा पोर्नोग्राफीको चर्चा फेरि बढेको छ । सोही प्रसंगमा जोडिन आएकी छिन् मोडल गहना...
बाबा ! स्कुल खुल्छ त अब ? मैले त स्कुल जाने बाटो नै बिर्सिसकें होला । साथीहरू शिक्षकहरूको अनुहार पनि बिर्सेहुँला । स्कुल खुल्ने...
काबुल । अफगानिस्तानका विश्वविद्याययमा महिला र पुरषका लागि छुट्टै कक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विश्वविद्यालयमा महिलाले पढ्न पाउने भए...
कोरोनाको कारण सलमानले सारे फिल्म
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्नो फिल्म ‘राधे’लाई अब पूर्वनिर्धारित समयमा रिलिज नगर्ने भएका छन् । उनले यो फिल्म आगामी २२ मेमा...
१०० जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप २ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १०० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणमा १०० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको...
सनसिटीबाट धुलिखेल आएकालाई प्रहरीको निगरानी
सर्लाहीमा थपिए ७ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ५४२ पुग्यो
स्मृतिमा महेन्द्र जी
राष्ट्रका नाममा रोनाल्डोको १ सय १ गोल
श्रीमन्नारायण - September 11, 2021